ओमिक्रोन संक्रमित पहिलो ब्यक्तिको मृत्यु ! « Gaunbeshi
ओमिक्रोन संक्रमित पहिलो ब्यक्तिको मृत्यु !
प्रकाशित मिति : 14 December, 2021
काठमाडौ । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिम विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ। हालसम्म विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा यो नयाँ रूपका संक्रमित फेला परेका छन् । यद्यपी यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । एक दिन अघि, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ओमिक्रोनबाट संक्रमित पहिलो व्यक्तिको मृत्युको पुष्टि गरे।
त्यसबेलादेखि, ओमिक्रोनको फैलावटको बारेमा विश्वभर हलचल भएको छ। यद्यपि, वैज्ञानिकहरूले यो डरलाई बेलायती सरकारको गलत बयान भनेका छन् । विज्ञहरूले भनेका छन् कि पीएम जोन्सनले ओमिक्रोनवाट संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको धेरैजसो जानकारी लुकाएको छ।
वैज्ञानिकहरूले बेलायती सरकारलाई ओमिक्रोनको पहिलो मृत्युको बारेमा सकेसम्म धेरै जानकारी उपलब्ध गराउन अपील गरेका छन्। जस्तो कि उनले कोभिडको भ्याक्सिनका दुवै खोपहरू पाएका थिए की थिएनन् । अथवा उनी कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका ब्यक्ति थिए की ।
कम जानकारीका कारण मानिसमा अनावश्यक डर पैदा भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनले भने, ओमिक्रोन जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ। तर के यो भेरियन्ट संक्रमितको मृत्युको कारण रह्यो वा ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएपछि उनको अन्य कारणले मृत्यु भयो ।